Kiss Theory Good bye: Ulo ise na-emebi ụlọ ọrụ | Martech Zone
Wednesday, April 4, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ternyaahụ, agụchara m ịgụ Starfish na Spider: Ike a na-apụghị igbochi nke nzukọ ndị na-enweghị isi. Ọ bụrụ na m ga-ahazi ya, ọ nwere ike ịbụ 3 ma ọ bụ 4 n'ime 10. Ọ bụ ngwa ngwa ịgụ na ozi dị n'azụ ya bụ ma oge kwesịrị ekwesị ma na-enweghị atụ. N'eziokwu niile, agbanyeghị, enwere ike bipụtara ya dịka akwụkwọ ọcha ma nwee otu mmetụta ahụ. Nke a abughi mmejọ nye ndị ode akwụkwọ… ọ bụ naanị na akwụkwọ ahụ bụ otu nchọpụta na nkwenye. Ọ bụghị akwụkwọ e ji eme ihe.
Akwụkwọ Bob Prosen, Kiss Theory ọ dị mma dị nnọọ iche. Ozugbo m welitere akwụkwọ a, ọ dị m ka m si na onye na-agbapụ mgbago rịgoro n'ụgbọ mmiri rọketi. Naanị m site na iwebata ma enwere ozi bara uru. Nke a bụ teaser - omume nkwarụ ise na-eme ka ụlọ ọrụ na òtù dị iche iche ọsọ ọsọ:
Njuputa nke uzo doro anya
Enweghị aza ajụjụ
Nyochaa arụmọrụ dị ala
Na-eme atụmatụ n'ọnọdụ nke ọrụ
Iweghasị ihe egwu na mgbanwe
Ummm… ouch! Bob chịkọtara nkụda mmụọ m na-enwe n'ọrụ m. Ana m arụ ọrụ maka onye ọrụ dị egwu, nke na-aga nke ọma na-eto dị ka onye nzuzu. Ndị ọrụ na nkwalite ndị ọzọ, ọ na-adịkarị ka anyị ga-enweta ya. Bob amaghị ihe ọ bụla gbasara ụlọ ọrụ anyị mana ọ kpọgidere ya kpamkpam! Ndị a na- kpomkwem ihe ndị na-selata anyị na anyị ga-agbanwe ozugbo.
Enyefere m ụfọdụ akwụkwọ a n'aka ụfọdụ ndị nọ n'ọgbakọ. Enwere m olile anya na ha emeela ya site na iwebata! Enweghị m ike ichere ịkọwa n'ime akwụkwọ ndị ọzọ. Akwụkwọ ahụ anaghị elekwasị anya na omume ndị a na-emebi emebi, ọ na-elekwasị anya na ihe dị mkpa iji gbanwee nzukọ ma mee ka ọ na-aga n'ụzọ ziri ezi!
Ekwenyesiri m ike na m ga-eso gị kerịta ọtụtụ ihe site n'akwụkwọ a n'ime izu ole na ole sochirinụ. Bulie otu oyiri nke Kiss Theory Good bye nke Bob Prosen dere ka anyị wee nwee ike ikwurịta ya ọnụ.
Akwụkwọ edemede, Akwụkwọ edemede, na akụkọ ifo
Apr 4, 2007 na 3: 39 PM
Chaị, likeda ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ ugbu a. Ọ dị ka ụlọ ọrụ na-amalite itolite site na obere ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe ruo n'etiti nnukwu ụlọ ọrụ gaa n'ọtụtụ mpaghara nke ụlọ ọrụ, ụdị omume 5 ahụ na-adịkarị.
Apr 4, 2007 na 9: 47 PM
dang ọba akwụkwọ nke mpaghara m enweghị ya.
Adị m 100% gị na nke ahụ n'elu 5. M na-aga site na a "ka anyị na-eleghara ikpeazụ anyị post mortem na ikwugharị otu nsogbu" na m mmalite ugbu a. ugh.
Apr 4, 2007 na 10: 08 PM
Na-akpali mmasị, engtech. Anyị na-atụ ụjọ mmejọ ikpeazụ anyị nke mere na anyị akpọnwụọ na ọnọdụ atụmatụ. Izu site na ntọhapụ ma anyị ka na-arụ ọrụ yana arụmọrụ. Ahụ adịghị ya mma ma ọlị. N’otu ụlọ ọrụ, otu n’ime ndị kasị mma bosses mgbe m na-akpọ ya “Analysis Paralysis”.
Mgbe ụfọdụ ị ga-aga n’ihu. Ma, i rute na ị gaghị agagharị ma ọ bụrụ na ị gbanweghị!
Apr 5, 2007 na 12: 04 AM
Ọ bụrụ na ọ masịrị m ịgụ (na-abụghị edemede ederede blọọgụ) enweghị m ike iburu ma mechaa akwụkwọ iji zọpụta ndụ m.
Apr 5, 2007 na 7: 52 AM
Akwụkwọ na- m okike tinyekwa na ha n'ezie enweta n'ime m pụrụ ichetụ n'echiche. Anọ m na-agụchi akwụkwọ anya - ọkachasị n'ihi na anaghị m enwe ike itinye ihe m mụtara n'ọrụ m.
N'ezie, okike abụghị ihe bụ isi achọrọ maka ọrụ m na-arụ (n'agbanyeghị na ọ bụ isi na ya). ,, N'ezie, abụwo onye gụrụ akwụkwọ ma zụọ onwe gị na okike - yabụ echere m na imeghe akwụkwọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe enyemaka kacha mma maka gị. Nke ahụ bụ n'ezie ihe na-adọrọ mmasị, Bitt! Have nwere ebe ọzọ a na-emepụta ihe?
M na-agbalị ime 1 nke 5 akwụkwọ ka ọ bụrụ akụkọ ifo ka m wee lie na nduzi, teknụzụ, na ahịa. Oge agwụla m na nke ahụ ugbu a!
Apr 5, 2007 na 4: 38 AM
Ikekwe, ọ dị mkpa ka ị bepụ isi wee hụ ma ọ nwụọ ?? Na-egwu egwu.
Apr 5, 2007 na 7: 45 AM
Mma! Ntakịrị Azụ ọkụ ọchị! Afraidjọ na-atụ m na isi ga-egbu anyị n’ezie. Eleezie, n’agbanyeghi na anyi nwere okwu ise ndi a ilebara anya, ndi isi bụ onye m nwere okwukwe kachasị na ịme mgbanwe ndị dị mkpa.
O di nwute, adighi m ikike icho ime mgbanwe ya o kariri m ike. Ana m anwa ime mgbanwe, ọ bụ ezie!